ज्ञानविज्ञान – Ketaketi Online
ब्याक्टेरिया र भाइरसको सपना – डा. सरोज शाही
March 24, 2022 March 24, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on ब्याक्टेरिया र भाइरसको सपना – डा. सरोज शाही
दिउँसो साथीहरुसँग घुम्न जाँदा ग्रीष्मले बाटोमा चट्पटे फोहोर पानी खाएको थियो । अहिले साँझ उसलाई बेस्सरी पेट दुख्न थाल्यो । चिसो वरफ पनि खाएको थियो । साँझ परेपछि उसलाई हनहन ज्वरौ पनि आउन थाल्यो । ग्रीष्मको आमा–बाबु चिन्तित हुन थाल्नुभयो । ग्रीष्म पनि पेट दुख्यो भनेर कराउन थाल्दा बाबाले डाक्टर अंकललाई फोन गर्नुभयो-
March 7, 2022 March 7, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on गोमन सर्प
सर्पको नाम लिने वित्तिकै हामीलाई डर लाग्छ । त्यसमा पनि टाउको माथि उठाएर फडाँ फुकाएर चिरीएको जिब्रो ल्यापल्याप गर्दै चलाउने गोमन सर्प देख्दा त हाम्रो सातोपुत्लो नै उड्छ । गोमन सर्पले टोकेपछि मानिस मर्न सक्ने भएकाले हामी यसरी डराएका हाैँ । गोमन सर्पको सुलुक्क परेको, कडा मासुले वनेको शरीर र नागवेली गर्दै वगेर हिडने भएकोले पनि हामीमा डर पैदा हुन्छ । हुन पनि भारतमा मात्र गोमन सर्पले टोकेर प्रत्येक वर्ष कारीव दश हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा पनि गोमन सर्पको टोकाईबाट मानिसहरुको मृत्यु हुनेगरेको छ ।
राजधानीमा केक मेला
December 30, 2021 December 30, 2021 Ketaketi OnlineLeaveaComment on राजधानीमा केक मेला
राजधानी उपत्यकामा विभिन्न विषय र उत्पादनका मेला र प्रदर्शनी लाग्ने गर्दछ । आफ्ना धेरैथरि र प्रकारका उत्पादन तथा वस्तु एकै ठाउँमा जम्मा गरेर धेरैजनालाई एकै समयमा थाहा दिन यस्ता मेला तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्ने गरिएको छ तर यतिबेला भने बर्सेनि लाग्नेभन्दा अलग्गै खालको मेला लागेको छ राजधानीमा, केक मेला ।
शाङ्घाई मेट्रोलाइन विश्वको सबैभन्दा लामो
December 29, 2021 December 29, 2021 Ketaketi OnlineLeaveaComment on शाङ्घाई मेट्रोलाइन विश्वको सबैभन्दा लामो
डिसेम्बर ३० मा सञ्चालनमा आउने दुईवटा नयाँ मेट्रो लाइनहरू सँगै चीनको शाङ्घाईको मेट्रो नेटवर्कको कुल लम्बाई ८३१ किलोमिटर पुग्ने छ ।
December 25, 2021 December 25, 2021 kritikaLeaveaComment on अचम्मको जीव लामखुट्टे
असल मित्र पवनपुत्र हनुमान
September 13, 2011 March 16, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on असल मित्र पवनपुत्र हनुमान
प्राचीन भारतको किर्तकन्धा नगरीमा बाँदर जाति राज्य गर्दथे । ती बाँदर जातिको राजाको नाम सुग्रिव थियो । सुग्रिव एक आदर्श राजा थिए । उनका एकजना अभिन्न मित्र थिए । ती मित्रको नाम हनुमान थियो । हुनमान बाँदर जाति भए पनि धेरै बलिया र बुद्धिमान थिए । उनी यति धेरै बलिया थिए कि ठूला ठूला पर्वत पनि हातले उचाल्न सक्दथे रे भन्ने कुराको चर्चा बाल्मिकी ऋषिद्वारा लेखिएको रामायण महाकाव्यमा पाइन्छ ।